Nkwekọrịta ego nkeonwe na -akwalite njem ụwa na njem nlegharị anya 3.5%
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Iwughachi » Nkwekọrịta ego nkeonwe na -akwalite njem ụwa na njem nlegharị anya 3.5%
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
.Mmekọrịta nha anya nkeonwe na-akwalite njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ 3.5%.
Ọ bụ ezie na nkwụghachi azụ na ọrụ nkwekọrịta ga-eweta obi ụtọ, ịlaghachi na ọkwa COVID-19 ga-adabere n'ụzọ dị irè gọọmentị si egbochi ikpe ọhụrụ na ngwa ngwa akụ na ụba ụwa ga-alaghachi na nkịtị.
Nkwekọrịta nha nhata nkeonwe hụrụ mmụba dị egwu nke 300% n'ime Septemba ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga.
Ngụkọta nke nkwekọrịta 59 ka ekwuputara na njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ n'ime Septemba 2021.
Arụ ọrụ nkwekọrịta ka mma na isi ahịa dị ka US, Australia na South Korea n'oge Septemba 2021.
Ọrụ azụmahịa (mergers & nnweta (M&A), nha nha nkeonwe (PE), na ego achụmnta ego (VC) na ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, bụ nke na-eche ihu ajọ ọrịa COVID-19 ihu kemgbe mmalite nke 2021, akọpụtala 3.5% uto na Septemba, nke nnukwu mmụba na ọkwa ọkwa nke azụmahịa nha anya onwe.
Ngụkọta nke nkwekọrịta 59 ka ekwuputara na njem njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ n'oge Septemba ma e jiri ya tụnyere 57 amụọ ekwuputara n'ime ọnwa gara aga.
Deal ọrụ ka ga -agbaketa kpamkpam site na mmetụta nke ọrịa na -efe efe ma na -ahụ usoro na -ekwekọghị ekwekọ. Otú ọ dị, mgbe ịgba àmà mbelata ruo ọnwa abụọ n'usoro, azụmahịa rebounded na September.
Mkpọsa nke ego VC na azụmahịa M&A belatara site na 40.9% na 3.2% n'otu n'otu, ebe azụmahịa PE hụrụ mmụba dị egwu nke 300% n'oge Septemba ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga.
Arụ ọrụ nkwekọrịta ka mma n'ahịa ndị isi dị ka ndị USA, Australia na South Korea n'ime Septemba ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga, ebe UK na China hụrụ mbelata.